Disk-ka looma qaabaynin soo-kabashada xogta - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>>so>Disk-ka looma qaabaynin soo-kabashada xogta
Ka waran haddii diskku uusan qaabeysan? Sidee dib loogu soo ceshan karaa xogta muhiimka ah? Markaad isticmaaleysid disk adag, m disk U, ama kaarka xusuusta, waxaad inta badan la kulmaysaa dhibaatada in disk-ga aan la furi karin oo aan loo samaysan karin. Maxaan samaynaa markii kombiyuutarka uu muujiyo in diskigu uusan qaabeysan? Macluumaadka muhiimka ah ma laga soo kaban karaa? Hadda waxaan kaala hadli doonaa sida ugu habboon ee loo maareeyo disk-yada aan habeysan. Astaamaha iyo sababaha
Calaamadaha iyo sababaha
Calaamadaha: Maamulaha faylka ama maamulka disk-ga, laba-guji qeyb disk ah, nooca Ha furin qaab dhakhso ah. Dhibaatadani badanaa waxay ku dhacdaa mootooyinka adag ee guur-guura, U disk-yada, kaararka SD-ka iyo aaladaha keydka laga qaadi karo. Markuu diskku ku guul darreysto inuu furo oo dhaliso in aan la qaabeysan, ikhtiyaarka uu siiyo nidaamka qalliinka waa "Qaabka Disk" ama xir sanduuqa wadahadalka. Badanaa, ka dib qaabeynta, qaybinta si caadi ah ayey u gali kartaa, laakiin adeegsadeyaal badan ayaa diidan qaabaynta, sababtoo ah faylal aad u muhiim ah ayaa lagu kaydiyaa diskka. Sababaha caanka ah: korantada kadiska lamahuraanka ah, majiro ikhtiyaar keydinta warbaahinta la iska saari karo kahor intaan laga qaadin qalabka kumbuyuutarka ee laga saari karo kombiyuutarka, waxyeelada viruska, qeybaha xun xun, qalabka aaladaha kaydinta laftiisa, iwm. Maxaan sameeyaa haddii diskiga wadida aan la qaabeysan? Sidee loo soo ceshan karaa xogta? diskiga looma qaabeeysan, taasoo muujineysa in nidaamka faylka ee qeybtan uu burburay. Haddii xogta ku jirta diskka aysan muhiim aheyn, si toos ah waad u qaabeysan kartaa waxaadna u isticmaali kartaa diskka sida caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, haddii xogta diskku ay muhiim tahay, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa dib u soo kabashada xogta, ka dibna qaab u samee xogta ka dib soo kabsashada xogtu markay dhammaato. Sidee looga soo kaban karaa xogta kombiyuutarka aan dhameystirnayn? Halkan waxaad isticmaali kartaa barnaamijyada soo-kabashada xogta ee Bplandatarecovery si aad uxarato diskkan, ka dibna u nuqul xogta la helay diskiyada kale. Tallaabooyinka gaarka ah waa sidan soo socota:
Tallaabada koowaad: fur furiinka nooca bilaashka ah ee barnaamijyada soo kabashada ee Bplandatarecovery, hel oo xulo qeybta disk-ga ee u baahan in laga soo kabsado xogta barnaamijkan, ka dibna riix batoonka "soo kabashada", sida hoos ku cad. Muuji:
Haddii aad furto Bplandatarecovery oo aad si toos ah u arki karto xogta ku jirta disk-ga aan la soo koobi karin, markaa waxaad ubaahantahay inaad adeegsato howsha "soo kabashada" si aad iskaan u sawirto, oo aad si toos ah u nuqulto xogta aad rabto inaad ka soo kabato. Tag qaybaha kale. Tallaabada 2: Daaqadda "Soo-kabashada faylka" ee daaqadda, dhagsii badhanka "Start" si ay u oggolaato in kombuyuutarradu ay bilaabaan raadinta wixii ka maqnaa. Xog. Xaaladaha qaarkood, nidaamka faylka diskiga aan la dirin ayaa si xun loo dhaawacay, iyo macluumaadka qaar dib looma soo celin karo iyadoo loo eegayo qaab dhismeedka asalka ah. Sidaa darteed, marka iskaanka, waxaa lagu talinayaa in la hubiyo "iskaanka dheeriga ah ee noocyada faylasha loo yaqaan" ikhtiyaarka si markaa softiweerka u sameyn karo baaritaan qoto dheer si loo helo faylal badan intii suurtagal ah. Talaabada 3: Filter iyo dib u fiiriso faylasha si aad u hubiso saameynta soo kabashada. Bplandatarecovery wuxuu bixiyaa shaandhaynta feylasha iyo muuqaalka howlaha, taas oo ka caawin karta dadka isticmaala inay si dhakhso leh u helaan xogta la doonayo oo ay hubiyaan inuu faylkaasi waxyeello gaadhay. Talaabada 4: Nuqul faylalka. Hubi feylasha lagu soo celinayo natiijooyinka skaanka, ka dibna midig-riix jiirka oo dooro ikhtiyaarka "Nuqul ku Faylka Gaarka ah". Taas ka dib, waad cayiman kartaa goob aad ku keydiso xogta soo kabatay. diskiga looma qaabaynin
Sidee loo fogeeyaa diskka aan shaqeynin? Habka loo soo saaro disk-ga aan la soo dejin waa mid aad u fudud, haddii diskku uusan lahayn waaxyo xun, habka caadiga ah ee qaabku wuxuu hagaajin karaa qaladka diskiga. Si kastaba ha noqotee, ka dib qaabaynta, xogta qaybtani way dhammaatay. La-hawlgalayaasha yaryar ee aan haysan xog gurmad, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho barnaamijka Bplandatarecovery si aad u soo ceshato xogta ka hor inta aadan qaab-samayn. Laba jeer-guji "Kumbuyuutar" aaladda desktop-ka si aad u furato maareeyaha faylka. Raadi oo midig-dhagsii diskka aan la qorin ee ku jira maamulka faylka, oo xulo ikhtiyaarka "Qaabka". diskiga lama qaabayn
Daaqadda soo-dejinta, xulo nooca nidaamka faylka iyo macluumaad kale, ka dib riix batoonka "Bilow". Qaabaynta kadib markii la dhammeeyo, waad furi kartaa qeybta. Su'aalaha ku saabsan diskooga aan habeysnayn
1.p data-ka dib ma loo soo kaban karaa ka dib marka diskiga adag la qaabeeyo? Xogta dib ayaa loo soo kaban karaa kadib markii la qaabeeyo diskiga adag. Qaab-dhismeedka, nidaamka qalliinka wuxuu ku shaqeeyaa qaabeynta deg degga ah Qaabka qaabeynta wuxuu abuuraa nidaam faylal cusub mana cadeeyo xogta ku kaydsan qeybta adag ee qeybta. Haddii xogta aan loo qorin kadib qaabaynta, waxaad u isticmaali kartaa softiweerka soo kabashada xogta inaad soo hesho xogta lumay. Maxaan sameeyaa haddii U disk-ga aan la furi karin oo disk-ga aan la qaabeysan? diskiga U disk ma furi karo oo qaab deg deg ah qaabeynta micnaheedu waa qeyb ka kumbuyuutarka 'disk disk-ga' ayaa burburay.Waxaad u baahan tahay inaad qaab sameysato si aad u hagaajiso khaladaadka ku jira qeybta. Haddii xogta ku jirta USB flash Drive-ka ay aad muhiim u tahay, waxaad u baahan tahay inaad soo ceshato xogta ku jirta USB flash drive-ka ka hor inta aadan qaabeysan. Intaa waxaa sii dheer, kahor inta aan soo kabashada xogta la dhameystirin, ha ku sameynin jeeg disk (chkdsk) diskka U, si aadan u saameyn saameynta soo kabashada. 3. Muu qaban kari waayaa baaritaanka diskiga maxaa yeelay diskku ma u qaabeeysan yahay? Marka la sameynayo jeeg disk ah disk disk aan weli la qorin, waxay keenaysaa "Nooca nidaamka faylka ah waa RAW. CHKDSK uma isticmaali karto RAW Drive" Khaladaadka diskiga. Xusuusin: Haddii xogta ku jirta diskka ay aad muhiim u tahay, waxaad u baahan tahay inaad soo celiso xogta ka hor inta aadan qaabeysan. Soo koobiddu waa xalka in qalabka wax laga qaadi karo uu ku xiran yahay kombiyuutarka isla markaana diskiga aan la furi kareynin qaab. Isticmaalayaasha la kulma dhibaatooyin la mid ah ayaa raaci kara habka kor ku xusan si ay u qabtaan dib u soo kabashada xogta diskiga isla markaana ay ku dayactiraan diskiyada aan habeysan. Haddii aad rabto inaad baratid farsamooyin badan oo soo kabashada ah, fadlan raac bogga rasmiga ah ee Bplandatarecovery.
PreKa soo kabashada xogta guud
NextDisk wuxuu muujinayaa sida dib loogu soo celiyo xogta iyadoon qoondayn la sameyn